Hordhac: Club Brugge Vs Paris Saint Germain Kulankooda Champions League, Xidigaha Ka Maqan Labada Dhinac Iyo Shaxda
HomeWararka CiyaarahaHordhac: Club Brugge Vs Paris Saint Germain Kulankooda Champions League, Xidigaha ka maqan labada dhinac iyo Shaxda
Kooxda PSG ayaa Booqasho ugu tageysa Kooxda Club Brugge Kulan ka tirsan Champions league Guruurbka A, Paris Saint-Germain ayaa Kulankan Heysata Xidigo Muhiim ah.
Club Brugge: ayay u badan tahay inuu ka maqnaan doono garabka reer Colombia Jose Izquierdo, kaasoo dhaawac qaba. Marka laga reebo in aysan jirin arimo la ogyahay, tababare Philippe Clement ayaa la filayaa inuu heysto koox taam ah oo uu soo xusho.
Dhanka kale, tababaraha Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ma awoodi doono inuu u yeero adeega daafaca bidix ee Faransiiska Layvin Kurzawa iyo daafaca dhexe ee reer Spain Sergio Ramos. Waxaa jira shaki laga qabo helitaanka daafaca dhexe ee Faransiiska Presnel Kimpembe, qadka dhexe ee Talyaaniga Marco Verratti iyo daafaca midig Colin Dagba.
Xiddiga qadka dhexe ee reer Senegal Idrissa Gueye iyo weeraryahanka reer Argentina Angel Di Maria ayaa ganaax ku maqan. Isbaanishka Juan Bernat iyo Sergio Rico iyo xiddiga reer Brazil Rafinha ayaan lagu soo darin xulka.
Club Brugge XI (4-3-3): Simon Mignolet , Clinton Mata, Brandon Mechele, Stanley Nsoki, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Eder Alvarez Balanta, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Bas Dost, Noa Lang
Paris Saint-Germain XI (4-3-3): Keylor Navas , Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Marquinhos, Nuno Mendes, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Lionel Messi , Kylian Mbappe, Neymar
Laba kulan oo ay labada kooxood ku kulmeen UEFA Champions League, Paris Saint-Germain ayaa badisay labada kulanba.
Labada naadi ayaa markii ugu dambeysay iskaga hor yimid sanadkii 2019 -kii heerka guruubyada tartanka. Paris Saint-Germain ayaa 1-0 ku garaacday Club Brugge, waxaana u dhaliyay qeybtii hore ee ciyaarta weeraryahanka reer Argentina Mauro Icardi.
Garoonka Jan Breydel Stadium